ကိုလက်စထရောနှင့် ဆက်စပ်နေသောရောဂါများ - Page 36 of 51 - Hello Sayarwon
Dr. Ye Mhan Linn မှ ရေးသားသည်။ 16/02/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ကိုလက်စထရောတက်နေခြင်းက နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းဘူးဆိုတာ လူအများနားလည်သဘောပေါက်ပြီးသား အကြောင်းအရာတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုလက်စထရောတက်နေခြင်းကြောင့် နှလုံးသာမက အခြားကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေပါ ထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ သတိပြုမိသူ များများစားစားရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုလက်စထရောများခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ ရောဂါတွေအကြောင်း ဖတ်ရှူလေ့လာနိုင်အောင် ဒီဆောင်းပါးမှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုလက်စထရောများခြင်းကြောင့် သွေးလွှတ်ကြောတွေထဲ အဆီတွေအနည်ကျတဲ့အလျှောက် ၎င်းသွေးကြောတွေ မာလာပြီး artherosclerosis တစ်နည်းအားဖြင့် သွေးကြောကျဉ်းတဲ့ပြဿနာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီပြဿနာက သင့်နှလုံးကိုသာမက သင့်ဦးနှောက်ကိုပါ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပြီး ဦးနှောက်ဆီသွေးထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ သွေးကြောတွေ ပိတ်ဆို့သွားရင် လေဖြတ်နိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။
ဆီးချိုရောဂါ အမှတ် ၂
ဆီးချိုရောဂါအမှတ်၂ ရှိသူတွေမှာကိုလက်စထရောတက်နိုင်ချေ ပိုများပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါကို ကောင်းကောင်းထိန်းနိုင်ခဲ့ရင်တောင်မှ သွေးတွင်းကိုလက်စထရောပမာဏ အထူးသဖြင့် မကောင်းတဲ့ LDL ကိုလက်စထရောပမာဏ မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။
အဝလွန်ခြင်းနဲ့ ကိုလက်စထရောတက်ခြင်းရဲ့ ဆက်စပ်မှုကတော့ သိသာထင်ရှားတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အလွန်အမင်း အဝလွန်နေသူတွေမှာ အခြားသူတွေနဲ့ယှသ်ရင် ကိုလက်စထရောမြင့်တက်မယ့် အလားအလာ ပိုများပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲရလဒ်အနေနဲ့ သွေးချိုဆီးချိုရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါစတဲ့ ကိုလက်စထရောမြင့်ခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ရောဂါတွေ ရလာနိုင်ပါတယ်။
လိင်တံဆီ သွေးထောက်ပံ့ပေးတဲ့ သွေးလွှတ်ကြောတွေထဲ အဆီစုပုံလာတဲ့အခါ ကာမစွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်း ထိခိုက်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လိင်တံထောင်မတ်ဖို့ လုံလောက်တဲ့သွေးလှည့်ပတ်မှု မရှိတဲ့အတွက် လိင်ဆက်ဆံရာမှာ အခက်အခဲဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ တခါတရံမှာ လိင်တံမထောင်မတ်နိုင်ခြင်းက အမျိုးသားတွေမှာ ကိုလက်စထရောတက်နေကြောင်း သတိပေးနေတဲ့ လက္ခဏာတစ်ခု ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်အရ ဒီလက္ခဏာကိုကြည့်ပြီး သွေးကြောရောဂါရှိနေနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းတွက်ဆနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လိင်တံမထောင်မတ်နိုင်တဲ့လက္ခဏာ စပေါ်တဲ့အချိန်ကနေ နောင် ၄၊ ၅နှစ်အတွင်း နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရမယ့် အလားအလာရှိတယ်ဆိုတာ သတိပြုသင့်ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အမျိုးသား သွေးချိုဆီးချိုရောဂါ၊ အစာချေစနစ်နဲ့ ကျောက်ကပ်ရောဂါဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းရဲ့အဆိုအရ ကျောက်ကပ်အလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်းဟာ သွေးတွင်းကိုလက်စထရောပမာဏ မြင့်တက်ခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ Journal of the Society of American Nephrology မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ လေ့လာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှာ အဆိုပါပြဿနာနှစ်ခုရဲ့ ရှုပ်ထွေးတဲ့ ဆက်စပ်မှုသဘောတရားကို အဖြေရှာရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အပေါ်ယံကြည့်မယ်ဆိုရင် သွေးတွင်းကိုလက်စထရောမြင့်တက်နေပြီး ကျောက်ကပ်ဆေးနေရတဲ့ လူနာတွေဟာ သွေးတွင်းကိုလက်စထရောနိမ့်သူတွေထက် ပိုပြီးအသက်ရှည်ရှည်နေနိုင်ကြောင်း တွေ့ရမှာဖြစ်ပေမယ့် လေ့လာစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သူ ပညာရှင်တွေကတော့ ကိုလက်စထရောတက်တိုင်း ကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးလို့ ကောက်ချက်ဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။ ကျောကပ်ရောဂါရှိသူ လူနာတစ်ယောက်မှာ ကိုလက်စထရောတက်နေခြင်းဟာ ဒီလူနာက သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေထက် အာဟာရပိုမိုရရှိပြီး ရောင်ရမ်းမှုနည်းတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုသာ ညွှန်ပြနေတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့လည်း လူနာတွေရဲ့ သွေးတွင်းကိုလက်စထရောပမာဏအဖြေကို ကောက်ချက်ဆွဲရာမှာ အထူးသတိထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
Journal of the American Academy of Nephrology မှာ လတ်တလောဖော်ပြခဲ့တဲ့ လေ့လာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုက ကိုလက်စထထရောများခြင်းနဲ့ အယ်လ်ဇိုင်းမား ခေါ် မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းရောဂါရဲက ဆက်စပ်မှုကို တည်ဆောက်ပြသခဲ့ပါတယ်။ ကျူရှုတက္ကသိုလ်က သုတေသနပညာရှင်တစ်ဖွဲ့ကတော့ သေဆုံးပြီးသား လူ ၁၅၀ရဲ့ ဦးနှောက်တွေကို စစ်ဆေးလေ့လာခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ထဲက သုံးပုံတစ်ပုံလောက်မှာ dementia သို့မဟုတ် အယ်လ်ဇိုင်းမား မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းရောဂါရှိနေကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုရဲ့ ရလဒ်တွေအရ အယ်လ်ဇိုင်းမားရဲ့ အဓိကလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အာရုံကြောဆဲလ်တွေကြား beta-amyloid ပရိုတင်းအစုအဝေး (plaques) ရှိနေသူတွေဟာ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါမရှိသူတွေထက် ကိုလက်စထရောမြင့်တက်နေတာကို တွေ့ရှိခဲ့ပေမယ့် ဒီရောဂါရဲ့ အခြားအဓိကလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ သေဆုံးခါနီးအာရုံကြောဆဲလ်တွေထဲ ရှုပ်ထွေးလိမ်နေတဲ့ ပရိုတိန်းအမျှင် (tangles) ရှိနေသူတွေမှာတော့ ကိုလက်စထရောတက်နေတာကို မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဦးနှောက်လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် ကိုလက်စထရောများပြားခြင်းရဲ့ အနုတ်သဘောဆောင်တဲ့ သက်ရောက်မှုတွေကို အတည်ပြုနိုင်ဖို့ နောက်ထပ်သုတေသုပြုလေ့လာမှုတွေ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်နေပါသေးတယ်။
Health Conditions Linked to High Cholesterol Beyond Heart Disease. https://www.everydayhealth.com/high-cholesterol/symptoms/high-cholesterol-related-conditions/. Accessed August 8, 2017.
Diseases Linked to High Cholesterol. http://www.webmd.com/cholesterol-management/guide/diseases-linked-high-cholesterol. Accessed August 8, 2017.
7 Diseases Linked to High Cholesterol. https://www.healthgrades.com/conditions/7-diseases-linked-to-high-cholesterol. Accessed August 8, 2017.